किन वैवाहिक सम्बन्ध तोड्न डराउँछन् महिला ? यस्ता छन् कारण – ईमेची डटकम
किन वैवाहिक सम्बन्ध तोड्न डराउँछन् महिला ? यस्ता छन् कारण
हाम्रो जस्तो समाजमा महिलाको चरित्र तथा व्यवहारलाई लिएर धेरै नै चर्चा हुने गर्छ । त्यसैले आफ्नो बिग्रदै गएको सम्बन्धलाई बचाउने क्रममा महिलामाथि थुप्रै किसिमका दबाब परिरहेको हुन्छ । सम्बन्ध बचाउनलाई महिलाले हर प्रयास गरिरँदा उनीहरुमाथि परिरहेको दबाबका विषयमा धेरै मानिसहरुले ध्यान दिएका हुँदैनन् । भनिन्छ, सम्बन्धको जोडी आकाशमा बन्छ र सम्बन्ध निभाउने कार्य धर्तीमा हुन्छ । यद्यपि, स्वर्गमा बनेको यस्तो जोडीमा यदि आपसी तालमेल तथा प्रेममा कमी भयो भने सम्बन्ध धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । यसलाई हेर्ने हो भने केही यस्ता कारण छन् जसले कुनै पनि महिलालाई आफ्नो सम्बन्ध बचाइ राख्न सम्झौता गर्न बाध्य तुल्याइरहेको हुन्छ । ति कारण के-के हुन्, जानी राखौँ ।
मनोविज्ञानिकहरुका अनुसार शारीरिक तथा मानसिक उत्पिडन झेलेपछि कयौँ पटक महिला आफ्नो सम्बन्धको विषयमा द्विविधामा पर्ने गर्छन् । आफ्नो साथ हुने दुव्र्यवहारलाई लिएर उसले आफैँलाई दोषी मानिरहन्छन् । जसले गर्दा बिस्तारै उसको भित्र लुकेर बसेको आत्मसम्मान कमजोर हुँदै जानेछ । यसले आफ्नो जीवन अर्थहीन हुँदै गएको अनुभुति गर्न थाल्छन् ।
आफुमाथि हिंस्रक व्यवहार भइरहँदा पनि समाजको डरले महिलाले त्यस्ता विषयलाई सम्बन्धभन्दा बाहिर लैजान हिच्किचाउँछन् । समाजले के भन्छ भन्ने मानिसक सोचका कारण आफुमाथि बारम्बार भइरहेको दुव्र्यहारको घटना अर्को व्यक्तिलाई सुनाउन पनि डर मानिरहेका हुन्छन् ।
जीवन साथी सुध्रने आशा
महिलामाथि हुने दुव्र्यहार तथा हिंसाका घटनामा अशिक्षित महिलामात्रै फस्छन् भन्ने हुँदैन । रोजगारीमा रहेका तथा शिक्षित महिला पनि यस किसिमको सम्बन्धमा फसेका हुन्छन् । र त्यस्तो सम्बन्धलाई बाध्यताले निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यसको पछाडि आफ्नो जीवन साथी अर्थात पति भविष्यमा सुध्रने आशा पालिरहेका हुन्छन् । आफुले उसलाई छोडेर गएमा पतिमा झन नराम्रो असर पर्छ र उसको जीवन बिग्रन्छ भन्ने उनीहरुले सोच्ने गर्छन् । भावनामा बहकिएर वर्षौंसम्म उनीहरु दुखादायी सम्बन्धलाई बचाइ रहेका हुन्छन् ।
सन्तानको भविष्यका लागि
हाम्रो समाजमा एकल अभिभावक भएर सन्तानको जिम्मेवारी वहन गर्न अत्यन्तै मुश्किल मानिन्छ । यसमा अझ महिलाको कुरालाई जोड्ने हो भने थप कष्टकर र कठिन कार्य देखिन्छ । त्यसैले आफ्नो सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्ने चक्करमा महिलाले आफुलाई नै भविष्यको अन्धकारमा धकेलिरहेका हुन्छन् ।
हाम्रो समाजमा सम्बन्ध जोड्नु जति सहज छ, त्यसलाई तोड्नु अझ कठिन मानिन्छ । यदि कुनै महिला आफ्नो सम्बन्धबाट खुशी छैनन् र सम्बन्ध तोड्न चाहन्छिन् भने उसलाई परिवारका सदस्यले सम्बन्ध नबिगार्न सल्लाह दिन थाल्छन् । थुप्रै पटक परिवार, समाज तथा सन्तानका कारण महिलाले चाहेर पनि सम्बन्ध तोड्न सक्दिनन् ।
प्राय महिला आर्थिक रुपमा कमजोर भएकै कारण आफ्नो खर्चका लागि जीवन साथी अर्थात पतिमाथि निर्भर हुन्छन् । जसका कारण सम्बन्धलाई जबरजस्ती कायम राख्न उनको बाध्यता बन्ने गर्छ ।